Abdi Weli Aadan – Kooxda.com
Author: Abdi Weli Aadan
Real Madrid Oo Ku Jirta Wakhtigeedii Ugu Xumaa Ee Garoonkeeda Qarniga 21-aad, Goorma Ayaa Ugu Dambaysay Sidan Ay Haatan Garoonkeeda Ugu Dhibaatoonayso
Valencia, Levante, Betis, Tottenham, Fuenlabrada, Barcelona, Numancia, Villarreal, Leganes, Atletico Madrid, Juventus… & Athletic 12 koxoood oo ka mid ah 26 kooxood oo soo booqday garoonka Estadio Santiago Bernabeu xilli ciyaareedkan ayaa ugu yaraan kala baxay bar-baro kooxda caasimada. 14…
April 19, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Patrick Vieira Oo U Sharaxan Shaqada Kooxda Arsenal… Laakiin Arsene Wenger Ayaan Shaqada Laga Cayrin Doonin Xitaa Hadii Ay Arsenal Ku Fashilanto Hanashada Europe League
Halyeeyga Kooxda Arsenal ee Patrick Vieira ayaa si weyn ugu cad-cad in uu ku soo laabto kooxda Arsenal isaga oo tababare ah. Kooxda reer London ayaa raadinaysa tababare ay ku badasho Arsene Wenger kaas oo qaadanaya wakhtig adag xilli ciyaareedkan.…
DEG-DEG: Xiriirka FA-ga Oo Ganaax Dusha Ka Saaray Daafaca Kooxda Chelsea Ee Marcos Alonso & Kulamada Uu Seegi Doono Oo La Ogaaday
Xiriirka Anshaxa ee FA-ga ayaa Si Rasmi ah ganaax dusha uga saaray xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Chelsea ee Marcos Alonso kadib markii uu khalad xun oo uu ku dhaawici gaaray ku galay xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Southampton ee…
Tababaraha Kooxda Man United ee Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday kaliya 3 xiddig oo haatan xaqiiqsaday in ay ku soo bilaaban doonaan kulanka Sabtida ee Semi-finalka tartanka FA Cup-ka ee ay la ciyaari doonaan Tottenham. Tababaraha United ayaa sameeyay…
Daawo: Qaabkii Ay Liverpool U Soo Bandhigtay Maaliyadooda Cusub Ee Xilli Ciyaareedka 2018/2019
Kooxda Liverpool ayaa si Rasmi ah u soo bandhigtay maaliyadeeda Mininka ee xilli ciyaareedka dambe ay ku ciyaari doonto iyada oo ay soo bandhigeen xiddigeheedu. Qaar ka mid ah xiddigaha Kooxda 1-aad ayaa si qurux badan u soo bandhigay maaliyada…
Salah Oo Hogaaminaya Xiddigaha Kooxda Liverpool Oo Soo Bandhigay Maaliyada Cusub Ee Mininka Xilli Ciyaareedka Dambe
Kooxda Liverpool ayaa shaacisay maaliyadooda Mininka ee xilli ciyaareedka dambe ee 2018/2019. Maaliyada ayaa sidii caadada ahayd ah mid cas iyada oo lagu daray wax yar oo aanu lahayn midka xilli ciyaareedkan kaas oo ah loo sameeyay raqabad Maaliyada ayay…
Marka aynu dib u eegno kooxda ugu fiican premier League xilli ciyaareedka tan ilaa markii la bilaabay horyaalka premier League sanadkii 1992 waxa ka soo muuqda xiddigo kala duwan muddada 26 sano ah. Waxa ka soo muuqday xiddigaha ugu fiican…
Is badal aad u weyn ayaa ka dhici doona horyaalka premier League xagaaga marka uu suuqa kala iibsigu furmo xilli ay kooxaha premier League mar kale suuqa galin doonaan lacag badan. Laakiin si ay xiddigo tayo fiican u keenaan kooxohooda…
Goolhayaha kooxda Man United ee David De Gea ayaa sii wada qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ee cajiibka ahaa isaga oo sameeyay badbaadino cusub kulankii ay United guusha ka gaartay Bournemouth kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League. Goolal ay dhaliyeen Chris Smalling…
Tababare Zinedine Zidane ayaa shaxdiisa ku soo celiyay xiddigiisa reer Portugal ee Cristiano Ronaldo kulankii Atletico Bilbao waxana uu xiddigu sii waday gool dhalintiisii cajiibka ahayd isaga oo bar-bareeyay rikoor uu isagu horay u dhigay. Cristiano Ronaldo oo si qurux…
Ka Mid Ahaanshaha kooxda ugu fiican horyaalka premier League ee xilli ciyaareedkan ayaa ah midii ugu horaysay abaalmarino uu heli doono xiddiga Liverpool. Laakiin tababaraha kooxda Liverpool ayaa amaanay gool dhaliyihiisa kadib markii lagu tilmaamay in uu kooxda Liverpool kaligii…
Kooxda chelsea ayaa u safri doonta garoonka Turf Moor iyada oo kula ciyaari doonta kooxda Burnley kulan ka tirsan horyaalka premier League. Blues ayaa kulanka soo galaysa iyada oo ay dib u soo noolaatay rajadeeda u soo bixista champions League…
Muuqaal,Xasuus: Daawo 11 Sano Ka Hor Goolkii Ugu Quruxda Badnaa Abid Ee Uu Lionel Messi Dhaliyay
Arabacadii kuna beegnay 18 bisha April waxa ku beegantahay markii uu Loonel Messi dhaliyay goolkii ugu quruxda Badnaa kubada cagta kulan ka dhacay Camp Nou isaga oo ka dhaliyay Getafe. Messi ayaa kubada ka soo qaatay bartamaha garoonka waxana uu…
Sawirro:- Real Madrid oo Guuldaro ka bad baaday & Athlatic Bilbao oo dhibic kala laabatay Barnabao…..
Naadiga real Madrid ayaa Gegideeda Santiego Barnabao ku Marti qaaday Kooxda Athletico Bilbao Kulan katirsan Todobaadka 33 aad ee Horyaalka Laligaha dalka spain. Ciyaarta oo aheyd mid Xiiso badan ayaa waxaana ayku bilaabatay dar dar xoogan oo ay Muujiyeen…
April 18, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Chris Smalling & Romelu Lukaku Oo Guul Ku Hogaamiyay Man United, Bournemouth Ayay Garaaceen
Kooxda Man United ayaa guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Bournemouth kulan ka dhacay Vitality Stadium kana tirsanaa horyaalka premier League. Jose Mourinho ayaa kulanka soo galay isaga oo is badal ku sameeyay shaxdiisa kaydkana dhigay xiddigaha Romelu Lukaku…
Halyeeyga Ac Milan Ee Ricardo Kaka Oo Ka Hadlay Go,aankii Uu Ugu Biiray Real Madrid
Xiddigii hore ee kooxaha Ac Milan iyo Real Madrid ee Ricardo Kaka ayaa ka hadlay go,aankii uu kaga tagay kooxda Ac Milan uguna biiray kooxda Real Madrid. Halyeeyga kooxda AC Milan ee Ricardo Kaka ayaa qiray go,aankii uu ugu biiray…
Shaxda Rasmiga Ah Ee Real Madrid Vs Atletico Bilabo: Ronaldo & Benzema Oo Hogaaminaya Weerarka Los Blancos.
Kooxda Real Madrid ayaa goordhaw la ciyaari doonta kooxda Atletico Bilbao kulan ka tirsan horyaalka La Liga todobaadkiisii 33-aad kulan ka dhici doona garoonka Bernabeu. Zidane ayaa is badal ku sameeyay shaxdiisii ugu dambaysay ee Malaga isaga oo ku bilaabay…
Shaxda Rasmiga Ah Ee Bournemouth Vs Man United: Pogba Oo Ku Bilowday Shaxda United & Sanchez Oo Kaydka Fadhiya
Kooxda Man United ayaa goordhaw la ciyaaraysa kooxda Bournemouth kulan ka tirsan horyaalka premier League kulan baaqi u ah labada kooxood. Mourinho ayaa shax adag ku soo galay isaga oo fursad siiyay xiddigaha weerarka uga ciyaara kooxdiisa ee Rashford ee…
Kooxda Man United ayaa lagu soo waramayaa in ay mar kale koox cusub u soo bandhigtay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Paul Pogba iyada oo badalkiisa haatanba sii diyaarsatay kaas oo ay u dhaqaaqi doonto adeegiisa dhamaadka xilli ciyaareedkan. Man…
Kooxda Barcelona ayaa kulankii Celta Vigo ee xalay ku soo gashay iyada oo uuna shaxdeeda ku jirin xiddig ka soo baxay Akademiyada kooxda ee La Masia. Inkasta oo ay sidaas dhacday hadana waxa jiray xiddigo badan oo tayo leh oo…
Af hayeenka kooxda Barcelona ee Josep Vives ayaa ka hadlay mustaqbalka xiddiga kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti xilli kaas oo si weyn loola xiriirinayay kooxda Man United todobaadyadii ugu dambeeyay. Josep Vives ayaa sheegay in ay kooxda Barcelona ay ka…
Shaxda ugu fiican horyaalka premier League ayaa si Rasmi ah loogu dhawaaqay waxana la soo doortay shax run ahaantii aad u adag oo laga soo xushay xiddigaha premier League. Kooxda Man city ayaa ah kooxda xiddigaha ugu badan ku leh…
Daawo: Maaliyada Cusub Ee Man United Ee Xilli Ciyaareedka Dambe Oo Si Hoose Loo Helay
Xilli ciyaareedka horyaaalka premier League ayaa ah mid sii dhamaanaya iyada oo ay kulamada horyaalka premier League ka hareen 5 kulan oo kaliya. Kooxaha kala duwan ee premier league ayaa si hoose loo helay maaliyadaha xilli ciyaareedka dambe ay ku…
April 18, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 1
Tababaraha Kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa soo saaray Liiska xiddigaha uu kaga hor tagi doono kooxda Atletico Bilbao kulan ka dhici doona Bernabeu kana tirsan todobaadka 33-aad ee horyaalka La Liga. Tababare Zidane ayaa shaxdiisa dib ugu yeedha…
Waxa si Rasmi ah loo soo saaray shaxdii ugu fiicnayd xilli ciyaareedka premier League iyada oo loo doortay shaxda xiddigihii qaab ciyaareedka ugu fiican soo bandhigay xilli ciyaareedkan waliba si joogto ah. Sidii la filayay kooxda Man city oo ah…
Xiddiga Khadka Dhexe Ee Kooxda Arsenal Ee Mohamed Elneny Oo Shaaca Ka Qaaday Sababtii Uu U Diiday In Uu Arsenal Uga Tago – Inkasta Oo Ay Arsenal Aqbashay Dalabkii Lag Soo Gudbiyay
Xiddiga Khadka dhexe ee kooxda Arsenal ee Mohamed Elneny ayaa shaaca ka qaaday in uu iska diiday fursad uu kaga tagi karay kooxda Arsenal. 25 jirka reer Egypt ayaa ka tagi karay kooxda Arsenal intii lagu guda jiray suuqii Januar…
FA-ga England ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqay shaxda ugu fiican xilli ciyaareedkan waxana xiddigaha ugu badan ku leh kooxaha Man city iyo Tottenham. Xiddigaha qaab ciyaareedka fiican ku jira ee Kevin De Bruyne iyo Mohamed salah ayaa ka mid…
April 18, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 2
Kooxda Barcelona ayaa bar-baro kala kulantay kooxda Celta Vigo kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga todobaadkiisii 33-aad kulan ka dhacay garoonka Celta Vigo. Goolal ay u dhaliyeen xiddigaha Ousmane Dembélé iyo Alcacer ayaa Barcelona ka caawiyay in ay sii wadato…
Kooxda Kooxda Liverpool ee Mohamed salah ayaa xilli ciyaareedkan ka yaabsaday adduun weynaha isaga oo qaab ciyaareed waali ah soo bandhigay. Goolkii uu ka dhaliyay kooxda Bournemouth ayaa ah goolkii 40-aad ee uu Mohamed salah dhaliyay xilli ciyaareedkan tartamada oo…
Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Olivier Giroud ayaa u qalmay amaan badan kadib markii uu kaydka ka soo kacay kooxdiisa chelsea-na ku hogaamiyay guul soo laabasho leh kulankii ay Blues guusha ka gaartay kooxda Southampton. Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda chelsea…